Sala kakuhle kwiCírculo de Lectores, iincwadi ekhaya ukususela ngo-1962 Uncwadi lwangoku
Ndlela-ntle eCírculo de Lectores, emva kwamashumi amathandathu eminyaka ezisa iincwadi kumakhaya aseSpain.
UAna Lena Rivera Muñiz | | Izaziso
ICírculo de Lectores inikezele kwiinkampani ezikwaziyo ukuthatha incwadi naphi na kusingasiqithi kwiiyure ezingama-24.
Obo buchwephesha butshintsha indlela esilibona ngayo ilizwe kwaye imikhwa yethu ayisiyomfihlo. Oku kuchaphazela iimarike nokuba. Kwaye ngoku lithuba lokuthandeka kwabaninzi beCírculo de Lectores.
Inkampani, eyasekwa ngo-1962 kwaye yafunyanwa nguGrupo Planeta kwiminyaka emihlanu eyadlulayo, yayilahlekile kangangeshumi leminyaka.
Imizamo yokugcina inkampani kwiminyaka yakutshanje ngokubandakanya iimveliso ezintsha ezingenanto yakwenza neencwadi, imodeli yeshishini iphelile: ingxaki yayingezizo iimveliso ezinikezelwayo kodwa imodeli yokuthengisa. Ukuthengiswa kweekhathalogu akusenzi ngqondo kuluntu oluxhume ngokusisigxina kwi-intanethi kunye namandla okuhamba anokuthatha iiodolo naphi na usingasiqithi ngeeyure ezingama-48 ubuninzi ngaphandle kobunzima.
Izolo, nge-6 kaNovemba, uthungelwano lwezorhwebo lweCírculo de Lectores, olwenziwe ikakhulu ngabadla umhlala-phantsi abahambisa iincwadi ngeenqwelo zokuthenga emakhayeni abafundi, zazingasebenzi. Umahluko kuwo onke amaqonga okuthengisa iincwadi kwi-intanethi? ICírculo de Lectores ibonelela ngokuhanjiswa kanye ngenyanga kunye nezinye (iAmazon, iFnac, iCasa del Libro…) phantse kwangoko. Siphila kumaxesha apho ukukhawuleza kwenkonzo kulixabiso elenza umahluko kumthengi kwaye inyanga yokulinda ukufumana iindaba zamva nje ezivela kumbhali wakho omthandayo ayamkelwa xa ungayifumana ngeeyure ezingama-24.
Itekhnoloji itshintsha indlela yethu yokubona inyani, iminqweno yethu, imikhwa yethu kunye neemfuno zethu.
Ihlabathi liyatshintsha, amashishini ayatshintsha, kodwa ngandlela thile iincwadi ziyaqhubeka nokufikelela kumakhaya aseSpain kwaye iindaba ezimnandi zezokuba ukusetyenziswa kwencwadi kuye kwanda kunyaka ophelileyo ngokwamanani entengiso kwicandelo lokupapasha.
ICírculo de Lectores iya kuqhubeka, okwangoku, njengeqonga lokuthengisa elikwi-Intanethi, elikhuphisana neevenkile zeencwadi ezintsha ezikwi-Intanethi.
Nangona thina bafundi sikuthintela ukufunda ngokwamanani (incwadi yedijithali imele kuphela iipesenti ezintlanu zentengiso yeencwadi eSpain ngo-5), inyani yile, iyathandeka okanye hayi ngenxa yeminyaka isangqa besasaza amabali kwizindlu zaseSpain, ukuhanjiswa Iincwadi kwinqwelo yokuthenga kubonakala ngathi, kuluntu lwedijithali, umfanekiso ekufuneka uwukhumbule. Isidiliya njengoko usitsho kula maxesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Izaziso » Ndlela-ntle eCírculo de Lectores, emva kwamashumi amathandathu eminyaka ezisa iincwadi kumakhaya aseSpain.
Ilizwe lakuloFernando Aramburu
Imela nguJo Nesbø. UHarry Hole kunye nesihogo sakhe